प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक कलोज कहिले ?
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २० औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख ११ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा वीरगन्जको दियालो लर्डस प्लाजामा मध्याह्न १२ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्�...
नयाँ सारथी लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा वैशाख १० मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो १३ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालकस मितिको शनिबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख १० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काभ्रेको धुलिखेलस्थित संस्थाको प्रधान कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल २०...
हकप्रद निष्कासनको अनुमति पाएको नेपाल फाइनान्सले डाक्यो एजीएम, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । हकप्रद निष्कासनको अनुमति पाएको नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो २९ औँ वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख ३ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको कान्तिपथस्थित होटेल एल्लो प्यागोडामा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले अन्य कुनै उपयुक्त...
नेको इन्सुरेन्सको एजीएम आज, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले आफ्नो २६ औँ वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) आज चैत ९ गते डोकेको छ। सभा काठमाण्डौको ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय (बीमा भवन) मा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.७९...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो २० औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही चैत ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाकक्षमा बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
साल्ट ट्रेडिङद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले आफ्नो ५५ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको फागुन ६ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही चैत ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल १०.५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको एजीएम सम्पन्न, सञ्चालकहरु चयन
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको होटल रेडिसनमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको छ। २०७४ मंसिर २८ देखि वीमा व्यवसाय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेलगायत सञ्चालक...
आरम्भ चौतारी लघुवित्तद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यही चैत २७ गते वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काभ्रेको बनेपा–८ स्थित बनेपा पार्टी भेन्युमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
बेष्ट फाइनान्सको एजीएम सम्पन्न
काठमाण्डौ। बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको २५ औँ वार्षिक साधारणसभा आज शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिमलाल पौडेलको सभापतित्वमा काठमाण्डौको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको हो। सभाले आव २०७७/२०७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा बार्षिक वित्तीय विवरण पारित गरेको छ।...
प्रभु इन्स्योरेन्सको एजीएम चैत ३० मा, लाभांश पाउन कहिलेसम्म बन्नुपर्छ सेयरधनी ?
काठमाण्डौ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो २६ औँ वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही चैत ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित प्रभु कम्प्लेक्समा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल ११.५८ प्रतिशत...
जीवन विकास लघुवित्तद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही चैत २५ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा मोरङको कटहरी–२ स्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य...
नेशनल हाइड्रोपावरको स्थगित वार्षिक साधारणसभा चैत ११ मा हुने, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको स्थगित २५ औँ वार्षिक साधारणसभा पुनः यही चैत ११ गते डाकिएको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले स्थगित वार्षिक साधरणसभा पुनः आह्वान गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बालुवाटारस्थित डेलिस ओपेरा रेस्ट्रो एन्ड बैंक्वेटमा दिउँसो १ बजेबाट हुनेछ। यसअघि कम्पनीले हिजो फागुन ३० गते...
सामलिङ्ग पावरद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । सामलिङ्ग पावर कम्पनीले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत २१ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। सभाले सञ्चालक समितिको कायम संख्या ११ जनाबाट घटाई ७ जना कायम गर्न नियमावलीमा...
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको एजीएम आज, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २८ औँ वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) आज फागुन ३० गते डोकेको छ। सभा काठमाण्डौको थापागाउँस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल ७ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा ६.६५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर...
नेशनल लाइफको एजीएमबाट १९% बोनस सेयर पारित, सबै वित्तीय सूचक उत्साहप्रद
काठमाण्डौ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ३३ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लाभांश पारित भएको छ। काठमाण्डौको लाजिम्पाटस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा वेभिनारमार्फत भएको सभाले उक्त आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको १९ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयर कर प्रयोजनार्थ रु.३ करोड ३९ लाख ८ हजार ८९२...